युगसम्बाद साप्ताहिक - दुबै कुरा देशका निम्ति अशुभ सूचक हुन् - महेश्वर शर्मा
आज हरेक पक्षमा सुधार्नेभन्दा उधार्ने काम भैरहेकोलाई नै उपलब्धि मान्नुपर्ने हो भने त विडम्बना नै भन्नुपर्दछ । हिजो आजका सरकारी क्रियाकलाप हेर्दा ‘सुकाइदे गाँड भन्दा थपिदे गाँड’ भनेजस्तो देखिन्छ । जता हे¥यो उतै ‘जो चोर उसैको ठूलो सोर’ भनेजस्तो स्थिति छ । नेता र मन्त्रीहरु जनतालाई सदाचारका उपदेश पस्कन्छन्, तर संसदमा मनोनित गर्दा दलाल, पूँजीपति, ठेकेदार, हरेक क्षेत्रमा सिण्डिकेट चलाउनेहरु मनोनित गरेर आफ्नै भ्रष्ट प्रवृत्ति देखाउँछन् भने पत्याउने स्थिति कहाँ रहन्छ ?
भ्रष्टाचारमा गन्हाएको कुनै आफन्त वा पोषक प¥यो भने उसलाई अख्तियार नलाग्ने बरु अर्का ठाउँमा सरुवा गरे–गराएर जोगाउने मन्त्री परिषद् र अदालती अभ्यासको अनुशरण अब विस्तारै निजामती र अन्य क्षेत्रमा समेत हुन थाल्यो भने पनि आश्चर्य हुनेछैन । वाइडबडी जस्ता काण्ड त्यसै सेलाएका त हैनन् होला ! भनिरहेको सुनिन्छ । सरकारका अनर्थ कसैले कोट्यायो भने त्यसलाई ढाकछोप गर्न अनेक बहाना गरिन्छ । हालै सरकारी पार्टीका एउटा अध्यक्ष प्रचण्डले– “केही तत्व परिवर्तन उल्ट्याउन लागिपरेका छन्” भन्नु आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तर्घुलन हुन नसक्नुको झुसिलो डकार सम्झिएको छ ।
बाढी–पैरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोप हरेक वर्ष आउँछन् भन्ने थाहा छ । तर, योपटक सिकेर अर्कोपटक प्रकोप नियन्त्रण र व्यवस्थापनका उपाय बेलैमा सोचिदैनन् । यसैपटक पनि नेता र मन्त्रीले सबैतिर हाहा र हुहु गरे, हेलिकोप्टरबाट निरीक्षण गरेर उपदेश पनि दिए, सिद्धियो । आगामी दिनलाई ध्यानमा राखृेर बेलैमा तटबन्ध निर्माण गर्ने, जोखिमका बस्ती स्थानान्तरण गर्ने, भारतसित कुरा गरेर पानीको निकास खोल्ने इत्यादि काम गरिंदैन । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय नियम विपरीत बनाएका तटबन्धले डुबान पारेकोमा यहाँका नेता र सरकार निरीह छन्, बोल्न सक्दैनन् ।
संसदीय टोलीले हालैको बाढीको प्रकोप निरीक्षण गरेर बाढीको कारण चुरे दोहन, बालुवा–गिटी निकासीलाई कारण देखाएको छ । के त्यो कुरा पहिले थाहा थिएन ? एकछिन मनांै– आज मात्रै थाहा भएछ रे, तर अब त नियन्त्रण गर्नुप¥यो नि, खै त्यसको चासो ? नियन्त्रण नगरिनुमा ठेकेदारीको चासो छ, कमिशनको स्वार्थ लकेको छ । होइन भने किन सरकारले ढुंगा, वालुवा र गिटी ठेक्का दिन्छ र निकासी गराउँछ ? वास्तविक कुरा सरकारले नै चाहेको छैन, चाहेमा तुरुन्तै रोक्न सकिन्छ । यस्तै हो भने कसरी समाधान निस्कन्छ ? के प्राकृतिक प्रकोपबाट पनि नेताले नै फाइदा लिन खोजेका हुन् ? होइन भने चाहेमा चुरे जोगाउन किन सकिंदैन ?
यस पटकको बाढी, पहिराको विनाशले उठिबास लगाएपछि अब ‘विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण’ गठन गर्ने भनेको सुनियो । विपद व्यवस्थापन शाखा त गृह मन्त्रालयमा छँदैछ । प्रहरी परिचालित छन्, सेना परिचालित गरिन्छ । आवश्यक साधनको संग्रह भने गरिंदैन । प्राधिकरण बनाएर कतिलाई जागीर खुवाउने र खर्च बढाउने मात्रै हुन पनि बेर छैन । नत्र आवश्यक सुविधा मात्रै जुटाइदिए गृह मन्त्रालय, सेना र प्रहरी नै सक्षम छन्, अरु धाचाकाचा नै चाहिंदैन । तर यहाँ काम होइन कुरा मात्रै गर्ने परिपाटीले स्थायी रुप धारण गरेको छ । गर्नुपर्ने कामभन्दा प्रचार मात्रै बढी हुन्छ । यथार्थको धरातलमा उभिएर निष्पक्षतासाथ कामगर्ने इमानदारीको अभाव नै दुर्भाग्य भएको छ ।
बाहिरबाट हेर्दा आजको सरकार आफैं शक्तिशाली छ । तर एक प्रकारको तानाशाही कम्युनिष्ट सरकार सम्झिएको छ । बहुमतको मातमा अँठ्ठिएको विपक्षी कांग्रेस लाचार भएर आफ्नै रागले चाउरिएको स्थितिमा शक्तिशाली सरकार ढुक्कसंग अघि बढ्नुपर्नेमा किन अलमलिएको छ त ? अरु कारण होइन, केवल यो सरकार बिरुद्धसंयोगी तत्वको मिश्रणले बनेको हुनाले ती दुई तत्व परस्पर घुलन हुन नसकेर आन्तरिक उल्झनमा परेको स्थितिले गर्दा यहाँ सरकारको मेसो अघि नसरेको यथार्थ हो ।
बिरुद्धसंयोगी पदार्थ सात्म्य हँुदैन । एउटा ग्रुपको रगत अर्को ग्रुपमा नमिले जस्तै स्थिति छ आज सरकारको पनि । बिरुद्धसंयोगी पदार्थ विषाक्त पनि हुन्छन् । यतिबेला विपक्षी कांग्रेस भाँडिनु अर्को कुलक्षण हो । विपक्ष अहिले मणि हराएको स्थितिमा छ । यी दुबै कुरा देश, जनता र प्रजातन्त्रका निम्ति अशुभ सूचक हुन्– चेतना भया !